ब्रोकरबाट प्रवाह हुने मार्जिन ऋणको सीमा बढ्दै ! Bizshala -
ब्याजदरमा सम्झौता गर्न ब्रोकर तयार, बजार गतिशील हुने आश
काठमाण्डौ । ब्रोकरबाट प्रवाह हुने मार्जिन ऋणको सीमा खुकुलो बनाइने भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले भित्र्याएको मार्जिन ऋणको सुविधामा व्यवहारिक कठिनाई भएकाले मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ संसोधन भई सीमा केही खुकुलो हुने भएको हो ।
नेप्सेले कार्यविधि संसोधनका लागि कामु सहायक प्रबन्धक सुरेश जोशीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको थियो । जसमा सदस्य सचिवका रुपमा आइटी अधिकृत बालकृष्ण कोजू छन् । नेप्सेकै वरिष्ठ आइटी अधिकृत प्रभाकर घिमिरे रहेको कमिटीमा ब्रोकरद्वय प्रियराज रेग्मी र सन्तोष मैनाली सदस्यको रुपमा रहेका छन्।
हालसम्म सो कमिटीको एउटा बैठक समेत बसिसकेको छ । जुन बैठकमा ब्रोकरहरुले मार्जिनको सीमा ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने विषय उठान गरेका छन् । हालको कार्यविधि यस्तो सीमा ५० प्रतिशत मात्र छ ।
यदि प्रस्ताव भए अनुसार कार्यविधि संसोधन भयो भने मार्जिनका लागि योग्य कम्पनीहरुको सेयर किन्न लगानीकर्ताले कुल लगानीको ३० प्रतिशत मात्रै पैसा निकाले पुग्छ ।
मार्जिन कारोबारका लागि नेप्सेले छनौट गरेका योग्य ३३ कम्पनीहरुमध्ये मार्जिन ऋणबापत पाएको रकमको कुनै एक स्क्रिप्टमा १० प्रतिशत मात्र लगानी गर्नसक्ने प्रावधानलाई पनि संसोधनका लागि अघि बढाइएको छ ।
जोशी नेतृत्वको कमिटीको बैठक यसै साता बसी संसोधनका लागि आएका प्रस्तावहरुमाथि निर्णय गरी नेप्से व्यवस्थापन समक्ष पेश गरिने कमिटीका एक सदस्यले बताए ।
कमिटीले मार्जिन ऋणको सीमा ७० प्रतिशत बनाउने गरी सुझाव नेप्से व्यवस्थापनसम्म पेश गर्ने तयारी गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर मार्जिनको सीमा ६५ प्रतिशत मात्र तोकेको छ ।
बियरिस ट्रेण्डमा रहेको सेयर बजारमा मार्जिन कारोबारको सुविधा नचलेकोमा ब्रोकरहरु समेत चिन्तित छन् । मार्जिन कारोबार गर्ने अनुमति पाएका सबै ब्रोकरहरुले ब्याजदर करिब १२ प्रतिशतसम्मै मार्जिन ऋण प्रवाह गरिने उद्घोष समेत गरेका छन् । ब्रोकर कार्यालयहरु हाल चरम घाटामा सञ्चालन भइरहेकाले मार्जिन कारोबार चलेमा ब्रोकर कमिसनबाट व्यवस्थापन हुने भएकाले समेत ब्याजदरमा अधिक लचकता अपनाउने ब्रोकरहरुको भनाइ छ ।
यता, पुतलीसडकस्थित एक ब्रोकर हाउसमा भेटिएका सेयर लगानीकर्ताहरुलाई बिजशालाले आफ्ना ब्रोकरहरुबाट मार्जिन ऋण किन नलिनु भएको भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो । हालसम्म मार्जिन कारोबारमा किन देखिएन त आकर्षण ? के भन्छन् लगानीकर्ताहरु ?
बजार बढ्ने आशा नभएर नै मैले मार्जिन ऋण नलिएको हुँ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार मार्जिन सीमा कम भएर नै मैले पनि यो सुविधा उपभोग नगरेको हुँ ।
नेप्सेले मार्जिन कारोबारका लागि सीमित ३३ कम्पनीहरुमा तोकेकाले यो सुविधाप्रति म आकर्षित भइँन ।
margin trading margin lending nepal stock exchange